Thatha iViking Oddmar ngokwamanqanaba angama-24 agcwele ukulunga | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Oddmar, okanye yintoni iklasi eyi-Master yohlobo lwamaqonga
I-Oddmar yenye yezo midlalo zemidlalo zilulonwabo nje ukudlala umdlalo kwaye uphonononge ngalinye lala manqanaba abanzi okokuqala. Omnye wale midlalo uphuma rhoqo ngonyaka kwaye sihlala sibambekile de siwugqibe.
Un ukuthunyelwa kobuchwephesha bobuchwephesha kuwo onke amanqanaba kwaye kuyo yonke into ime ngaphandle, nangona ngokuqinisekileyo uya kufakwa kwisikhalo kunye nokuncwina okukhutshwa yiViking yethu ehlekisayo nenomdla. I-Oddmar ngumdlalo weenkcukacha esithandana nawo ngenxa yendlela eyilwe ngayo kuwo onke amanqanaba.
1 Iqonga eliphakamisa kakhulu ibha esemgangathweni
2 Ngokubhekisa ngokucacileyo kuNintendo
3 Kwaye ngamanqanaba abanzi
6 Itreyila esemthethweni
Iqonga eliphakamisa kakhulu ibha esemgangathweni
Ukuthi u-Oddmar uphakamisa kakhulu ibha esemgangathweni, sithetha njalo kuba ngoku ngekhe ube nakho ukufumana amaqonga ngemizobo emnandi. Kodwa kuya kufuneka usebenze kuseto, izandi zabalinganiswa, indawo ebonakalayo kwimibala kunye neenkcukacha, oopopayi abagqibeleleyo abagudileyo kwaye uyilo lwenqanaba ekufuneka sicinge kancinci ukuphuma kuzo ezinye zeengxaki ezo sijongene nazo.
Oddmar kunjalo esekwe kwiintsomi ze-norse kwaye siza kungena ezihlangwini zeqhawe elineendevu ukuze simse kwiindawo ezininzi zokuzonwabisa. Into emayithethwe kukuba yonke imeko-bume, abalinganiswa kunye noseto banalo thando lukhethekileyo lweViking olwenza umdlalo owahlukileyo. UMobge wenze umsebenzi ogqwesileyo malunga noku kwaye singabaqhwabela izandla kuphela kwinqanaba eliphezulu kunye nokhathalelo olubekwe kulo mdlalo we-Android.
Kwaye khange sithethe ngezinye Ukubhekisa kumaqonga asentsomini afana neSuper Mario Bros. Kuya kufuneka woyise abachasi abaxhuma kubo, ke hamba ulungiselela ukulinganisa ukutsiba kwakho kakuhle. Enye into enomdla ka-Oddmar kukuba ngalo lonke ixesha igxuma, iya kushiya ngasemva umkhondo we-mushroom ngamanye amaxesha esinokuwusebenzisa ukuqhubeka nokutsiba.
Ngokubhekisa ngokucacileyo kuNintendo
Naliphi na iqonga eliqhayisa ngokuba linalo kufuneka libhekisele kumdlalo weNintendo. I-Oddmar inayo kwaye iyakwazi ukunika umnxeba wokugqibela kumdlalo oza kubakho enye yezona zinto zilungileyo kulo nyaka 2019. Kuluhlu lwethu lweyona midlalo ilungileyo ye-2019; sinethemba lokuba awuphosanga enye ye-2018.
Umdlalo olula kakhulu kwaye siya kuwuphatha u-Oddmar ukuyihambisa ngasekhohlo okanye ngasekunene ngokucinezela ecaleni ngasekhohlo, kwaye kwenzeka ntoni ngokutsiba kunye nokunyakaza okukhethekileyo esinokuthambo. Ngokusengqiqweni inyuka. Inyani yile yokuba ithathwa ngokugqibeleleyo kwaye inomdla kakhulu ekuhambeni.
Singumdlalo oza kusikhupha abanye bahleka ukuba enye inezo grunts kunye nezandi ezifunxa uOddmar. Zihlengahlengiswe ngokugqibeleleyo ukuze zifezekise iimpembelelo ezinqwenelekayo xa indoda elihlwempu iwela elwandle okanye iwele ngaphaya kokutsiba ukuya kungqubana nezinye zeentshaba esiza kuzifumana.
Kwaye ngamanqanaba abanzi
Uninzi lwamaqonga esinawo kwintengiso, ngaphandle kwemeko ebekekileyo, zihlala zifutshane ngobude yamanqanaba. U-Oddmar usinika yonke into kwaye uyasimangalisa ngamanqanaba abanzi apho kuya kufuneka songe inkqubela phambili yethu ukuba izinto zibenzima ukubuyela kuyo. Le yenye yezona zinto zibalulekileyo zomdlalo othembisa okuninzi kwaye kuyonwabisa ukudlala nescreen se-AMOLED (ewe, ndinzima, kodwa yile nto iyiyo).
Oddmar iza Android for phumelela nje ngeklasi yakho yenkosi indlela yokwenza iqonga lokwenyani. Uyilo olugqwesileyo lomlingiswa, oopopayi bebonke, iindawo ezinobomi ezibeka umoya ogqibeleleyo kuyo nayiphi na enye yeziganeko, isandi seshumi esinengoma kunye neziphumo ezahlukeneyo kwaye, mandithini, amanqanaba aphindwe kakuhle ukuze sikwazi ukubalungiselela kancinci; Hi ndlela leyi, zizonke zingama-24.
U-Oddmar ubeka ngaphambili nasemva kohlobo lwamaqonga ukuze silinde imidlalo engakumbi yolu hlobo kwaye kufanelekile nangakumbi ukuthi ungumdlali ohambahambayo kwaye usuka kwiiPC nakwizinto eziduduzayo. I-ode kuhlobo olo kwaye ifunyenwe simahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle.
Inika umlingo kuyo yonke indawo
Amanqanaba amakhulu ama-24
Ukuba iphepha lemveliso alikho ngeSpanish
Umthuthukisi: Imveliso yeMobge
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Oddmar, okanye yintoni iklasi eyi-Master yohlobo lwamaqonga
OPPO A1K: Uluhlu lokungena olutsha lwebhrendi
I-Lenovo Z6 Pro: Isiphelo esitsha sophawu